कुन तारिखमा जन्म लिने मानिस कस्ता हुन्छन् ? जन्मअनुसार तय हुन्छ व्यक्तिको स्वभाव - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»कुन तारिखमा जन्म लिने मानिस कस्ता हुन्छन् ? जन्मअनुसार तय हुन्छ व्यक्तिको स्वभाव
कुन तारिखमा जन्म लिने मानिस कस्ता हुन्छन् ? जन्मअनुसार तय हुन्छ व्यक्तिको स्वभाव
By मनिषा थापा on ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार ११:५१ स्वास्थ्य/जीवनशैली
कुनै पनि महिनाको १ तारिखमा जन्मनेहरूको भाग्यशाली नम्बर १ हुन्छ । अंक १ को कारक ग्रह सूर्य हो तसर्थ यस्ता व्यक्तिलाई सूर्यको प्रभाव विशेष रूपमा परेको हुन्छ ।
अंक ज्योतिषका अनुासार १ तारिखमा जन्मने मानिस रचनात्मक, सकारात्मक सोच भएको तथा नेतृत्व क्षमताका धनी हुन्छन् । यस्ता मानिसले जे काम सुरु गरे पनि त्यसलाई पूरा गरेरै छाड्छन्, अन्यथा यिनीहरूलाई शान्ति मिल्दैन । यिनीहरूमा कुनै पनि काम गर्नुअघि पूर्ण योजना बनाउने विशेष गुण हुन्छ । यिनीहरू आफ्नो कामप्रति पूर्ण इमानदार हुन्छन् ।
आफ्नो इच्छा पूरा गर्ने पूर्ण प्रयत्न गर्छन् । यिनीहरू एक नम्बरका प्रेमी हुन्छन् । प्रेमी वा प्रेमिकाका स-साना चाहना पूरा गर्न पनि सदैव तयार रहन्छन् ।
शुक्र, विहि र मंगलवार शुभ हुन्छ ।
रिसलाई नियन्त्रणमा राख्न सके ठूलै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन् ।
रुबी धारण गर्नु शुभ मानिन्छ तर यसका लागि ज्योतिषीय परामर्श आवश्यक छ ।
आइतवार र सोमवार लाभदायी हुन्छ ।
पहेँलो, सुनौलो तथा खैरो रंग शुभ हुन्छ ।
सुन तथा तामाबाट विशेष लाभ प्राप्त हुन्छ ।
पुष्पराज, पहेँलो हीरा तथा पहेँला रंगका रत्न तथा जवाहरत विशेष लाभदायक हुन्छन् ।
यिनीहरूका लागि आइत, सोम तथा शुक्रवार शुभ मानिन्छ ।
हरिया तथा हलुका हरियो रंग विशेष फलदायी हुन्छ भने सेतो तथा क्रिम कलर पनि लाभप्रद हुन्छ ।
मोती, चन्द्रमणि तथा हरियो-पहेँलो रत्न यिनीहरूका लागि शुभ मानिन्छ ।
हरेक महिनाको ६, ९, १५, १८ र २७ तारिख विशेष लाभदायक हुन्छन् ।
६ र ९ अंकवाला व्यक्तिहरूसँग यिनीहरूको राम्रो मित्रता हुन्छ ।
यिनीहरूका लागि बैजनी, रातो, गुलाफी तथा नीलो रंग शुभ हुन्छ ।